“နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၉) မိုးရိပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၉) မိုးရိပ်
“နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၉) မိုးရိပ်
“မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာ….ငါမယုံဘူးကွာ…..အမေမရှိတော့ဘူးဆိုတာ…ငါမယုံနိုင်ဘူးကွာ…ငါ….ငါ..အမေ့ ကိုတွေ့ ပါရစေကွာ”
စကားလုံးတိုင်းဟာ ရင်ထဲမှာ ဆို့ နင့် နေလေသည်။ အချစ်၇ဆုံးအမေကိုမှ လောကကြီးထဲက ဘာဖြစ်လို့ များ ခေါ်ထုတ်သွားရတာလဲ ကံကြမ္မာရယ်။အမေဖြစ်ရမဲ့ အစား သူသာဖြစ်လိုပါတော့လားကွ။………လောကကြီးနဲ့သူကို စွန့် ခွာသွားတဲ့ အမေကတော့ ကုတင်ထက်မှာ လဲလျောင်းနေလေသည်လေ။……………….
“အမေ….အမေ ထပါအုံးအမေရယ် သားအလုပ်ကနေ ပင်ပန်ပြီး ပြန်လာရင် မောပန်းတာတွေ ပျောက်အောင် အပြုံးလေးနဲ့ မကြိုတော့ဘူးလားဗျာ……“
“ထပါအုံး အမေရယ်…………အမေ သားခေါ်နေတာကြားတယ်မလားဟင်….သားကိုတစ်ယောက်တည်းမထားခဲ့ ပါနဲ့ ဗျာ သားတောင်းပန်ပါတယ်…..”
““မင်းဇော် စိတ်ကိုထိန်းပါကွာ သူငယ်ချင်းရယ်…………………..”
“လုပ်ပါအုံးသူငယ်ချင်းတို့ ရယ်…..အမေ့ ကို ပြန်ခေါ်ပေးပါနော်…………….ဆရာရယ် အမေ့ ကိုကယ်ပေးပါနော်…….”
စကားသံတွေ တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အခန်းငယ်လေးထဲမှာ သူတစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ငိုနေသည်ပဲလေ။ လောကကြီးရယ် ဘာ့ ကြောင့် များ အမေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ခွဲခွာခိုင်းရတာလဲ ကံကြမ္မာကြီးရယ်။ အမေ့ ရဲ့ နောက်ဆုံး ထွက်သက်လေးကိုတောင် ကျွန်တော်မမှီရတာလဲဗျာ……..
“မင်းဇော် သူငယ်ချင်းရယ် အရာရာကို ဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားပါကွာ…….”
“အေးပါကွာ ငါသိပါတယ် ….. ဒါပေမဲ့ငါဘယ်လိုမှမယုံနိုင်ဘူးကွာ…….”
“အေးပါကွာ မင်းငါတို့ နဲ့ လိုကနကွာ…… ခဏပဲဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါ…… ရက်လည်ပြီဆိုတော့……မင်းကို တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ ရမှာ စိတ်မချဘူးကွာ…..”
“အေးပါကွာ မင်းတို့ စေသနာကို ……..ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်………..ဒါပေမဲ့ ကွာ အမေ့ ရဲ့ အရိပ်တွေ လွှမ်းချုံနေတဲ့ဟော့ ဒီအိမ်ကနေ ဘယ်မှ မသွားချင်သေးဘူးကွာ..”
“ဒါဆိုလဲ ငါတို့ လဲ မင်းနဲ့ အတူတူအိပ်မယ်ကွာ….”
သူ့ အပေါ် အရမ်းကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်း မင်းခန့် နဲ့ ဝင်းထွန်း သူ့ အတွက်တော့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေပါပဲလေ…….”
နောက်တစ်နေ့မိုးလင်းတော့ အရင်ဆုံး တမ်းတမိတာ အမေ့ ရဲ့ ဘုရားရှီခိုးသံလေးပါ။ အခုတော့ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သတ္တ၀ါတွေကို မေတ္တာပို့ သည့် အသံ
အရာရာအားလုံးကို ယူဆောင်သွားပြီလား ကံကြမ္မာရယ်…………။
“အေးကွာ ငါအိပ်လို့ မရလို့အစောကြီးနိုးနေတာလေ……..မင်းတို့ နိုးပြီဆိုရင် ကော်ဖီဆိုင်သွားရအောင်ကွာ….”
ကောင်ဖီဆိုသို့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်သား ထွက်သွားကြလေသည်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ ကော်ဖီဆိုင်သို့ ရောက်တော့ ၀င်းထွန်းက စကား စပြောလေသည်။
“မင်းဇော် မင်းချစ်သူ လင်းငယ်မလာပါလားကွာ…”
“သူလဲ မသိလို့ နေမှာပါကွာ……..နားလည်ပေးလိုက်ပါကွာ နောက်တော့ လာမှာပေါ့ကွာ….”
“မင်းခန့်ငါ့ ကို ဖုန်းခဏလောက်ကွာ…….လင်းငယ်ဆီကိုဆက်မလို့ …”
“လင်း ဘာတွေပြောနေတာလဲ……….ကိုရှင်းပြပါရစေအုံးကွာ ”
“တော်ပြီ….တော်ပြီ….ရှင်အသံကို မကြားချင်ဘူး ရှင် ကျမကို မေ့ လိုက်တော့ ကျမလဲ ရှင်ိကိုမေ့ လိုက်ပြီ……..”
ပြောပြီးဖုန်းချသွားလေသည်။ သွားပြီ အခုမှ ဘာမှ မရှိတော့ဘူးကွာ။ 7.12.2005 ဒီနေ့ ဟာ ကို့ ကို တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ တာ (၁)နှစ်တိတိပြည့် ပြီနော်ချစ်သူ မင်းကတော့မေ့ နိုင်ပေမဲ့အရမ်းချစ်ခဲ့ တဲ့ ငါကတော. ဒီနေ့ အထိ တစ်ရက်ကလေးမှ မေ့ လို့ မရခဲ့ ပါဘူး…..ချစ်သူရယ်…..
ရှေ့ သို့ ဆက်ပါအုံးမည်………….ခင်မင်လေးစားလျှက်………..။
ခလေးမလေး က အကျိုးအကြောင်း ဃဃဏဏ မမေးမြန်းဘဲ သစ်စိမ်းချိုး ချိုးသွားတာပေါ့ဗျာ ။ ဗီဒီယိုဇါတ်ကားတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ ပရိသတ်တွေ မျက်ရည်တောက်တောက်ကျကြရမယ့်အခန်းပါဘဲ ။
အမေတစ်ယောက်လုံးဆုံးရှုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ချစ်သူကပါ ထားခဲ့လေတော့ မတွေးရဲအောင်ပါပဲ..။
အချစ်ကို တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ သူပေါ့လေ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်က တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ သူက ကျရှုံးရတာ့မယ်လေ
သူ့ အတွက်ကံကြမ္မာက ဖန်းတီးလိုက်တာပဲလေ